Fandalovan’ny rivodoza Enawo : haingam-piasa amin’ny fijerena ny fahavoazana ny Pnud | NewsMada
Fandalovan’ny rivodoza Enawo : haingam-piasa amin’ny fijerena ny fahavoazana ny Pnud
Tsy an-kiandriandry manoloana ny loza nandalo teto amintsika. Nihetsika avy hatrany ny vahiny fa tsy toy ny mpitondra eto amintsika, nitangorona teto an-dRenivohitra tato anatin’ny andro vitsy.
Nanao sidina ana’habakabaka nijery avy eny ambony eny ny fahavoazana manerana ny Nosy ny eo anivon’ny Pnud, tato anatin’ny telo andro nisesy. Nitarika izany ny solontenan’ity rafitry ny Firenena mikambana eto amintsika ity, i Violet Kakyomya, sy ireo delegasion’ny sampandraharaha miaraka amin’ny Pnud. Anisan’izany ny Pam, Unicef, Unocha/Undac… Nisafo sy nanao sidina amin’iny avaratry ny Nosy iny izy ireo. Hatrany Maroantsetra sy ny tany Sambava hatramin’ny afakomaly, ary nitohy tany Antalaha, omaly. Efa namaly sahady ny antsoantson’ireo traboina, indrindra fa ireo filàn’ny mponina maika ny Pnud. “Tena ilaina ny fitetezana tahaka izao mba hahafahanay mijery mivantana ny fomba hanampiana sy hanohanana ny mponina sy ny manampahefana eny ifotony ary ny governemanta”, hoy ny avy amin’ny Pnud, Violet Kakyomya, rehefa niantsona tao Sambava izy ireo.
Midika ho tsy fahatokisana ny mpitondra
Efa nahetsika avokoa ireo iraka sy ekipa manokan’ny Unocha/Undac, nanomboka ny alatsinainy, nialoha ny rivodoza teo, ho fanampiana ireo mpitantana eny ifotony. Anisan’izany ny tany Analanjirofo, Sava ary Sofia. Natao hanampy ny ezaky ny governemanta izy ireo sady handrindra ny vonjy voina, ny fanombanana sy famaritana ny laharam-pahamehana, ny fitantanana ny torohay sy ny vaovao marina momba ny loza voajanahary ary koa ny fandrindrana ireo fanampiana iraisam-pirenena.
Midika izany fa tsy hiandry ny tatitry ny mpitondra izy ireo fa niasa avy hatrany. Ho hentitra koa amin’ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny fanampiana ireo traboina. Endriky ny tsy fahatokisana ny mpitondra koa ny ao anatin’izany ?